China Semi Mune Nzeve Dhizaini C C Bluetooth Yechokwadi Pasina Manzwi Earbuds T15 Kugadzira uye Fekitori | Yong Fang
Semi Mune Nzeve Dhizaini USB C Bluetooth Yechokwadi Pasina Manzwi Nzeve T15
Bluetooth Solution: JL6976 V5.1
Li-bhatiri Kugona: 3.7V, 35 naRaama
zita rechinhu: T15
Mutauri dhayamita: ￠ 10mm
Yekuchaja nguva yevese nzeve: 4.5 nguva
【Yakagadzikana ATS Chipset, Shanduro5.0】Ichi chechokwadi chisina waya nzeve chakavakirwa pakakwirira magumo ATS chipset, ATS 3015, inoratidzirwa ine yakagadzika bluetooth kuita uye yakaderera latency;
【10mm Mutyairi, Semi Mune Nzeve Dhizaini】Zvekupedzisira zvenguva refu kupfeka nyaradzo uye kugwinya kwakasarudzika, ino bluetooth nzeve dzakagadzirwa musemi mune nzeve maitiro uye mukati meimba mune ane simba 10mm madhiraivha.
Imate Yekupedzisira Bass Yakakwira Kujeka 6mm Neodymium Mutyairi】yepamusoro stereo 6mm neodymium mukati mehunyanzvi uye ergonomically yakabwinyiswa acoustic edzimba inobereka yakadzika yakadzika bass crystal yakajeka kurira;
【Yekupedzisira Yakadzika Latency Feature YeMitambo Yemitambo】Iyo inotsigira iyo yepamusoro yakaderera latency mutambo wemitambo, kana isu tichitamba mitambo, tinogona kuona, kunzwa, kunzwa uye kuita kune zviri kuitika mumutambo zvinobudirira. Ichi ndicho chikonzero parizvino, vanhu vazhinji vanoshandisa maredhiyo emitambo mahedhifoni, pachinzvimbo cheasina waya emitambo mahedhifoni, kunyanya kune nyanzvi dzemitambo vatambi. Nekuvandudzwa kweiyo latency, ikozvino, yakawanda uye yakawanda isina waya yemitambo mahedhifoni anozove emitambo kufarira sarudzo;
Yakasarudzika Kusimba Uye Ergonomic Injini Dhizaini】Kune mazhinji ema tws earbuds, vanhu vari kunetseka nezve kugadzikana kusimba uye kudonha kubva munzeve. Yedu ruzivo R & D timu yakaita yakadzama uye indepth ongororo uye yakawanda nguva yekuedza bvunzo kugadzirisa uye kuongorora izvi zvakajairika asi misoro yemusoro. Uye, yeiyo yakasarudzika kugwinya, iyo silicone nzeve matipi akagadzirwa zvakavanzika kune iyi modhi;
【USB C Bhatiri Yenyaya Kutsigira Kusaja Wireless WirelessKuti irambe ichikwidziridzwa zvizere, iyo yakajairika micro 5 pini simba rekuchaja socket inotsiviwa neyakafarirwa USB C socket. Chii chimwe. Iyi modhi inogona kugadzirwa neisina waya yekuchaja rutsigiro. Ichi chinhu chinosarudzika uye chinoshanda cheiyi modhi .Neichi chimiro, iyo bhatiri kesi inogona kuchinjwazve ne USB C tambo kana isina waya yekuchaja ndiro;
【Bata Kudzora Uye IPX 5 Maitiro】Seyechokwadi isina waya nzeve inogona kushandiswa pasi pemamiriro akasiyana uye nharaunda, iyi modhi inogona kupasa iyo IPX 5 mvura yekudzivirira bvunzo. Nekudaro, kana tichiita mitambo yemitambo, tinogona kupfeka pairi tws nhare yekuteerera mimhanzi, kutaura kwefoni, kana kuteerera kune mamwe mapurogiramu asina waya;
【Zvinowanikwa Zvekushandisa Nyore Kushandisa】Kazhinji, izvo zvekushandisa zvinosanganisira izvi zvikamu, inokurumidza gwara, 3 saizi akagadzirwa silicone nzeve matipi, uye simba kuchaja tambo;
Pashure: Yemakwikwi Mutengo Ruvara Sanganisa Wireless Bluetooth Music Headphone BT-8026
Zvadaro: Yekutanga fekitori Tws Earphone & Headphone Sports Headset Kumhanya Fitness Wireless Earbuds T18
USB C Wireless kuchaja High End Realtek TWS Ea ...
Yekutanga fekitori Tws Earphone & Headphone ...